လေ လည်​ခြင်းဖြင့်​ ဝိတ်​ချနည်း - APANNPYAY
Home / ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ / လေ လည်​ခြင်းဖြင့်​ ဝိတ်​ချနည်း
လေ လည်​ခြင်းဖြင့်​ ဝိတ်​ချနည်း
Apann Pyay 11:15 AM ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ Edit
လေ ၁ခါလည်​ရင်​ ၆၇ ကယ်​လိုရီ ​လောင်​ကျွမ်းတယ်​၊ ဒါ​ကြောင့်​ ၅၂ ခါ​ လေလည်​ရင်​ ဝိတ်​ ၁​ပေါင်​ကျမယ်​တဲ့.. 😂😂 တစ်​ရက်​ ၁၀ ​ပေါင်​ကျချင်​ရင်​ အခါ ၅၂၀ ​လေလည်​ရပါမယ်​တဲ့….
Facebook page တစ်​ခုရဲ့ post ​ကြောင့်​ ၂၀၀၂ တုန်း က အ​တော်​​လေးအုတ်​​အော်​​သောင်းနင်း ဖြစ်​သွားကြ​ဖူးတယ်​… share ကြ.. ​လေလည်​ကြ.. 😂😷😷 ဖြစ်​နိုင်​/မဖြစ်​နိုင်​ ငြင်းကြခုံကြ၊ လက်​​တွေ့စမ်းတဲ့သူကစမ်းကြနဲ့​ပေါ့ ..
ကျန်းမာတဲ့ သာမန်​လူတစ်​​ယောက်​ဟာ တစ်​ရက်​ကို ၁၄~၁၈ ကြိမ်​​ပဲ လေလည်​နိုင်​တယ်​လို့ ​လေ့လာသူ​တွေက ဆိုပါတယ်​..
၁ ​ပေါင်​ကျဖို့အ​ရေး ၅၂ ခါဆို​တော့.. 😅အိမ်း..
ကျ​နော်​က​တော့ မဖြစ်​နိုင်​ဘူးလို့ ထင်​ပါတယ်​။
စကားမစပ် ​​လေလည်​တာနဲ့ပတ်​သက်​ပြီး ဖတ်​ထားမှတ်​ထားသမျှ ​ဝေမျှပါရ​စေခင်​ဗျ… 😁
• စအိုဝက​နေ တစ်​နာရီ ၇မိုင်​နှုန်းနဲ့ ထွက်​ပါတယ်​။
• သာမန်​လူတ​ယောက်​ဟာ လီတာဝက်​ပမာဏလည်​ပါတယ်​။
• အပူချိန်​ ၉၈.၆ ဒီဂရီဖာရင်​ဟိုက်​ရှိပါတယ်​။
• အမျိုးသမီး​တွေထက်​ အမျိုးသား​တွေက ​လေပိုလည်​ကြပါတယ်​။
• အမျိုးသမီး​တွေဟာ ဟိုက်​ဒရိုဂျင်​ဆာလဖိုဒ်​ပါဝင်​မှုပိုများ တဲ့အတွက်​ သူတို့အီးက ပိုနံပါတယ်​၊ ဒါ​ပေမဲ့ သူတို့အီးကို ရှူတာက ကျန်းမာ​ရေးနဲ့ပိုညီညွတ်​ပါတယ်​။
​လေလည်​တာမှာ အဓိကက နိုက်​ထရိုဂျင်​ဓာတ်​​ငွေ့ပါဝင်​ပါတယ်​။ သူက ကျန်​တဲ့ဓာတ်​​ငွေ့အားလုံးရဲ့ 20%~90% ပါဝင်​ပါတယ်​။
၁။ ကာဗွန်​ဒိုင်​​အောက်​ဆိုဒ်​ > အီးထုထည်​ရဲ့ 10~30%
၂။ ​အောက်​ဆီဂျင်​ > 10% နှင့်​အထက်​
၃။ မီသိန်းဓာတ်​​ငွေ့ > 10% ခန့်​
၄။ ဟိုက်​ဒရိုဂျင်​ > 10~50% ခန့်​ တို့ဖြစ်​ကြပါတယ်​။
#မီသိန်းနဲ့ဟိုက်​ဒရိုဂျင်​က​တော့ မီး​လောင်​လွယ်​တဲ့အတွက်​ သင့်​ရဲ့အီးဟာ မီး​လောင်​​စေနိုင်​ပါတယ်​(လက်​​တွေ့စမ်းသပ်​ကြည့်​ပါ) 😅 တခါတရံ ဆာလဖာ ပါတဲ့အီးဆိုရင်​ ပုပ်​အက်​အက်​အနံ့ရတတ်​ပါတယ်​။
တစ်​​ယောက်​နဲ့တ​ယောက်​ အီးနံ့မတူတာက​တော့ စားတဲ့အစားအစာ​ပေါ်မှာ မူတည်​ပါတယ်​။ ​လေလည်​တဲ့ အချိန်​မှာ ဆာလဖာနဲ့ဆက်​စပ်​တဲ့ဒြပ်​​ပေါင်းက အီးနံ့ကို ပြင်း/​ပျော့​စေပါတယ်​။
၁။ #Hydrogensulphide ။ ကြက်​ဥပုပ်​နံ့၊ အင်​မတန်​နံ၊ မီး​တောက်​​စေနိုင်​၊ များများရှူမိရင်​ အဆိပ်​အ​တောက်​ဖြစ်​နိုင်​။ 😁
၂။ #Methanethiol ။ ​ရေခဲ​သေတ္တာထဲ အကြာကြီးထည့်​ထားတဲ့ မုန်​ ​လာထုပ်​၊ ​ဂေါ်ဖီထုပ်​ကရတဲ့အနံ့မျိုး။
၃။ #DimethylSulphide။ ပဲပင်​​ပေါက်​​ကြော်​ရင်​ရတဲ့ အနံ့မျိုး။
ဒါက​တော့ အူမကြီး (သို့) ဒွါရ​ပေါက်​မှာရှိတဲ့ ကြွက်​သားနဲ့ဆိုင်​ပါတယ်​။ 😁 အဲဒါ​ကြောင့်​ အသံအတိုးအကျယ်​ ကွာခြားတာဖြစ်​ပါတယ်​။ အနံ့က​တော့ အီးသူခိုးက ပိုနံတယ်​လို့ဆိုကြပါတယ်​။ ကျ​နော်​မရှူ ဖူးလို့မသိပါဘူး။ 😁
၁။ #တစိမ့်​စိမ့်​နည်း။ အချိန်​ယူရပါမယ်​.. အသာအယာ လွှတ်​ထုတ်​ရပါမယ်​၊ ​လောရင်​​တော့ အသံအကျယ်​ကြီးထွက်​သွားနိုင်​ပါတယ်​.. ကျွမ်းကျင်​မှုရှိဖို့ အတွက်​
​လေ့ကျင့်​ဖို့ လိုအပ်​ပါတယ်​.. 😂😂
၂။ #​ချောင်းဟန့်​နည်း။ စည်းချက်​ကိုက်​ဖို့လိုပါတယ်​၊ ​ချောင်းဟန့်​သံအကျယ်​ကြီး​ပေးရင်း ရှင်းထုတ်​ရမှာပါ.. timing မကိုက်​ရင်​​တော့ “အဟွတ်​..ဘူ”.. ဆိုပြီး အရှက်​ကွဲနိုင်​ပါတယ်​။ 😅😅
၃။ #လမ်း​လျှောက်​ရင်းလွှတ်​နည်း။ အန္တရာယ်​အကင်း ဆုံးဖြစ်​ပါတယ်​။ နီးစပ်​ရာတံခါး​ပေါက်​ဆီ လမ်း​လျှောက်​ရင်း လွှတ်​ထုတ်​ရမှာပါ၊ သင်​​ပေါက်​မှန်းမသိနိုင်​ပါဘူး၊ 😎
#သတိပြုရန်​။ ​ရေကူးရင်းဆိုရင်​​တော့ ​ရေပလုံစီထတတ်​ပါတယ်​။ 😅😅😅
#​လေနဲ့ဝမ်း မကွဲရင်​​တော့… 😅😅😅​သေ​ပေါ့..
၃။ အီးအနံ့ရှူပါကကျန်းမာ​ရေးအတွက်​​ကောင်းခြင်း ( ဆဲလ်​များ​သေဆုံးခြင်း၊ နှလုံး​ရောဂါတို့ကိုကာကွယ်​​ပေးသည်​)
၄။ ​လေလည်​ခြင်းဖြင့်​ ကျန်းမာ​ရေး​ကောင်း​ကြောင်းသိနိုငြ်​ခင်း။
၅။ ​လေလည်​ မလည်​ကိုကြည့်​ခြင်းဖြင့်​ ​နေထိုင်​စား​သောက်​မှုပုံစံ ​ပြောင်းနိုင်​ခြင်း။
၆။ ကျန်းမာ​ရေးအတွက်​ သတိ​ပေး​ခေါင်း​လောင်းသံ သဖွယ်​အသုံးပြုနိုင်​ခြင်း။
၇။ ​လေလည်​ခြင်းဖြင့်​ ​လေထိုး​လေ​အောင့်​အစာအိမ်​နာ ချက်​ချင်းသက်​သာ​စေခြင်း။
စာရှည်​သွားတဲ့အတွက်​ ​အောက်​က​ခေါင်းစဉ်​​တွေ ​နောက်​မှထပ်​တင်​ပါမယ်​။
၁။ အီး​ပေါက်​များသူ အီးထိန်းချုပ်​နည်း
၂။ အီးမ​ပေါက်​သူအတွက်​ အလွယ်​​ပေါက်​​လေ့ကျင့်​ခန်း
(အမှားတစုံတရာပါရှိပါက ကျွနု​ပ်​၏​လေ့လာမှုညံ့ဖျင်းမှု သာ ဖြစ်​ပါ​ကြောင်းနှင့်​ ​ဝေဖန်​​ထောက်​ပြ​ပေးပါရန်​ အီးဆရာ အီးသမ္ဘာများအား ပန်​ကြားအပ်​ပါသည်​) =====😅😅😂😂😁😁😝😝======
Share ​ပေးခြင်းဖြင့်​ ဇီဝဒါနကုသိုလ်​ယူပါ….
Credit – M Min Tun ဆီမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်